Na-atọ ụtọ na ngwa ngwa
Encyclopedia nke nkwadebe nri
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji sie oporo?
Kedu otu esi esi esi nri oporo na mmiri esi mmiri? Tinye ọkara oporo na steamer na mmiri esi mmiri. Kpuchie na uzuoku nkeji 5 ruo 8, wepụ oysters ka ha na-emeghe. Tufuo oyster ọ bụla na-emegheghị. Tinye oysters fọdụrụnụ. Ogologo oge ole ka oporo raw na-ewe iji esi nri? Weta mmiri na-eku ume na obụpde wee…
Kedu ka ị ga -esi ghee filet mignon medium obere?
Ogologo oge ole ka m ga-esi esi filet mignon na grill maka obere obere? Jiri oge ndị a maka ogologo oge ị ga-eji grill filet mignon site na grilling ozugbo: Maka ịkpụ 1-inch, gbanye 10 ruo 12 nkeji maka ọkara-obere (145 ° F) ma ọ bụ 12 ruo 15 nkeji maka ọkara (160 ° F). Maka ịkpụ 1½-inch, ghee nkeji 15 ruo 19…
Anyị nwere ike iji mmanụ mgbe ighe miri emi?
Enwere ike iji mmanụ e ghere eghe ọzọ mee ihe? Ee, ị nwere ike iji ya ọzọ. Mana enwere iwu ole na ole maka imegharị mmanụ obi ụtọ. … N'ihi na frying na-apụta na oke okpomọkụ, jiri mmanụ nwere ebe ise siga dị elu nke na-agaghị agbaji ngwa ngwa. Ndị a na-agụnye canola, ahụekere, ma ọ bụ mmanụ ihe oriri. Ogologo oge ole ka ị ga-edobe mmanụ mgbe omimi…
A na -eri nri esi nri Pam?
Isi nri ọ dị mma iri nri? Ndị na-ahụ maka nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) ekwuola na ọ dị mma iri ihe a na-esi nri. Pam a na-eri nri? Ihe nfesa enweghị osisi PAM na-ezute ntuziaka FDA na USDA niile. Mgbe a na-efesa PAM, obere gas na-adịghị emerụ ahụ na-ebufe ịgbasa ahụ wee gbasaa ngwa ngwa, na-ahapụ mmanụ ahụ na…
Ajụjụ gị: Ogologo oge ole ka ọ na-ewe ọkụkọ amịpụtara iji sie n'ime efere?
Ị nwere ike isi nri ọkụkọ raw na efere efere? Enwere m ike itinye ọkụkọ raw n'ime efere? Ị nwere ike iji ara ọkụkọ, apata ụkwụ ọkụkọ, ma ọ bụ n'ezie ọkụkọ ọ bụla fọdụrụnụ. Ọ dị mma iji ọkụkọ raw dị ka a ga-egbu nje bacteria niile ozugbo efere ahụ ruru 160 ° F. Agbanyeghị, ịkwesịrị ịma…
Ajụjụ: Ọ bụ iwu na-akwadoghị isi mmiri lobster?
Ị nwere ike ifriizi obụpde nri oké osimiri? Ọ dị mma sie lobster? Ọbụna isi anụ lobster agaghị egbu nje bacteria niile. Ya mere, ọ ka mma naanị idebe anụmanụ ahụ ndụ ruo mgbe ị na-ejere ya ozi. … Ya mere lobsters esi ndụ na-azọpụta anyị n'ụwa nke mgbu, ma gịnị banyere lobsters? …
Kedu ka esi edobe mkpuchi grill?
Kedu mgbe m ga-etinye mkpuchi na grill m? Ọ bụ ezie na a na-atụ aro ka ị nweta mkpuchi maka grill gị, ọ dịghị mkpa ka ị na-ekpuchi grill gị 24/7. Naanị cheta inye grill gị nke ọma na-ehichapụ ihe dị ka otu ugboro n'ọnwa, ma kpuchie ya mgbe ọ dị mkpa. Ka ị na-elebara gị anya…
Kedu ka grill grates kwesịrị ịdị ọcha?
Ị kwesịrị ịsacha grill grates? Jiri mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ na-asachapụ nke ọma, kpochaa griti gị. Wunye na mmiri ncha maka otu awa wee sachaa. Weghachite grates na grill gị, mechie mkpuchi ma kpoo ya ọkụ. Mgbe ọ kpochara ọkụ, jiri brush grill gị hichaa ihe ọ bụla ọzọ fọdụrụ na grates. Kedu ihe na-eme …
Kedu ihe dị iche n'etiti Bakingsoda na ntụ ntụ?
Enwere m ike iji soda n'ọnọdụ ntụ ntụ? Enwere m ike dochie soda soda maka ntụ ntụ? Ee, ọ bụrụhaala na enwere ihe acidic zuru oke iji mee mmeghachi omume (maka 1/2 teaspoon soda soda, ị chọrọ 1 iko mmiri ara ehi ma ọ bụ yogọt ma ọ bụ 1 teaspoon ihe ọṅụṅụ lemon ma ọ bụ mmanya). Nke bụ…
Kedu ka ị ga-esi mara ma anụ ezi esiri esi adịghị mma?
Ị nwere ike iri burger n'echi ya? Ogologo oge ole ka anụ ezi esiri esi ya dị mma? Ozugbo isichara anụ ezi, ọ nwere ike ịdịru ihe dịka ụbọchị 4 ruo 5 n'ime ngwa nju oyi. Ọ bụrụ na ịgaghị enwe ike iji ya n'ime oge ahụ, hapụ ya. Isi nri anụ ezi mebiri emebi ọ na-eme ka ọ dị mma? Ndị May…
Page1 Page2 ... Page785 Osote →
Ekele. Blọọgụ m gbasara isi nri na nri ị nwere ike imi na ihe ndị ọzọ. Na m na-enwekwa mmasị ịnwale na kichin na n'ihi ya, a na-enweta nri nri na-atọ ụtọ, salads, sauces. Na blọọgụ m, ị nwere ike ịgụ gbasara otu esi akwadebe nri dị iche iche: sandwiches, sandwiches, canapes, tartlet na ndị ọzọ. Jikọọ, ọ ga-adọrọ mmasị.
© 2022 dị ụtọ na ngwa ngwa